ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ? | Nepali Christians
ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ?
September 16, 2014 2:15 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
ख्रीष्ट येशुको पवित्र नाँउमा सबै दाज्यु भाई अनि दिदी बहिनीहरुमा मेरो जय मसिह् !!!!!
ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ? शरीरलाई मार्ने रोगसँग ? या आत्मालाई मार्ने पापसँग ?
यस बारेमा आज म तपाईहरुसँग आफ्नु ब्यतिगत बिचार बाँट्न चहान्छु !
जब हामीलाई मामुली ज्वरो आँउछ तब हामीले एउटा दबाई खान्छौ अनि तुरुन्तै ठीक पनि भैइ हाल्छौ यसैले हामीलाई ज्वरो आँउदा कुनै ठुलो चिन्ता नै लाग्दैन ! तर यदि त्यो ज्वरोको बदली जब हामीलाई कुनै घातक बिमार भनौ क्यान्सर जस्तो ज्यानलेवा बिमार लाग्छ तब हामी त्यो बिमारबाट बाँच्नलाई हामी सकेसम्म कोशिश गर्छौ ! डाक्टरले दिएको एक थाक दवाई जसको खाने समय तोकेको हुन्छ त्यो समयलाई हामीले एक मिनट पनि अघि पछि हुन दिदैनौ ! चाहे कति नै महँगो दाम किन नहोस् हामी त्यसलाई किनेर नै ल्याँउछौ ! जुन दवाईको खर्चको निम्ती हामीले कति मेहनत गरेर कमाएर भविश्यको निम्ती जोगाएर राखेको सारा ब्याँक ब्यालेन्स खाली गर्छौ त्यति गर्दा पनि भएन भने पुगेन भने शरीरको गर गहना सबै बेच्छौ या आफुसित भएको केहि कुरा बन्दक राखेर त्यँहाबाट पैसा उधार लिन्छौ अनि दवाई किनेर खान्छौ !
जब हामी यस्तो जानलेवा बिमारको शिकार हुन्छौ अस्पतालको बन्द कोठामा बसेर दिनमा अनगिनत चोटी पर्मेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौ ! मलाई यो बिमारबाट निको पार्नु होस् ! मलाई चँगाई दिनु होस् ! मलाई मर्नबाट बचाँउनु होस् ! मलाई नँया जिवन दिनु होस् ! दिनमा कयौ पल्ट यी दुई हात पर्मेश्वरको अघि प्रार्थनाको निम्ती जोडिएको हुन्छ अनि हाम्रो शिर झुकेको हुन्छ साथै हामीले जाने र चिने जति सबै मन्डलीमा यो बिमारबाट चँगाई पावोस् भनेर प्रार्थना गरी दिने बिन्ती पठाएको हुन्छौ ! भोखै प्यासै रहेर कति कति दिन उपवास बस्छौ !
अब प्रश्न उठछ एउटा बिमारबाट चँगाई पाउनलाई यति चोटी प्रार्थना ? यति धेरै खर्च ? यति धेरै कोशिष ? यति गहिरो चिन्ता ? यति भयँकर डर ? आखिर किन गरिन्छ त ? यसको सिधा जवाब यहि हुन्छ किनकि हामी मर्न चहाँदैनौ ! तर किन मर्न चहाँदैनौ ? जब कि हामी सबैले यो राम्रोसँग जान्दछौ कि हामी जन्मे पछि त मर्नै पर्छ ! फेरी त्यो मर्नै पर्ने मृत्युबाट बाँच्नलाई यति ठुलो चिन्ता किन हामी लाई लाग्ने गर्छ् ?
काश यहि चिन्ता हामीले हाम्रो हृदयभित्र छुपेर बसेको पापको निम्ती गर्दो हो कति राम्रो हुने थियो ! किनकि हाम्रो हृदयमा त यति धेरै पापहरु छुपेर बसेको छ जो त्यो क्यान्सर भन्दा सौ गुना घातक छ जसले हाम्रो शरीरलाई होइन तर आत्मालाई नै नाश गरेको हुन्छ ! तर हामीले यो हृदयभित्र भएको पापबाट सँधैको निम्ती निको हुने कहिले पनि कोशिश समेत पनि गरेको हुँदैनौ ! एउटा ज्यानलेवा बिमारबाट बाँच्नलाई हामी दिनरात पर्मेश्वरसँस्ग प्रार्थना गर्छौ ! उपवास बस्छौ ! चँगाईको प्रार्थनाको बिन्ती सबै मन्डलीमा पँठाउछौ ! भए भरको पैसा रुपिया खर्च गर्छौ ! डाक्टरले जुन जुन कुराबाट हामीलाई टाडा रहनु भनेको छ त्यी कुराहरुबाट हामी आफुलाई कति टाडा राख्छौ ! न खानु भनेको कुरालाई हामीले छुदैनौ समेत अनि अन्तमा हामी त्यो बिमारबाट मुक्त हुन्छौ अनि स्वस्थ हुन्छौ !
But What About Sins ? हामी सबैलाई रामरी थाहा छ हाम्रो हृदय पापै पापले भरिएको छ अनि हामीलाई यो पनि थाहा छ पापलाई पर्मेश्वरले घृणा गर्नु हुन्छ अनि एउटा पापी मानिसलाई स्वर्गको राज्यमा प्रेवश गर्न पर्मेश्वरले अनुमति दिनु हुन्न यो सब जाने पछि के हामीले त्यो पापबाट मुक्त हुनलाई यस्तै कोशिशहरु गरेको छौ जुन कोशिष हामीले एउटा ज्यानलेवा बिमारबाट बाँच्नको लागी गरेको हुन्छौ ? झुट – इर्षा जलन – क्रोध – बैइमानी – अभिमान -लालाच – दिखावापन – दुष्टता – ब्यभिचार – दुर्ब्यवहार यी सबै पर्मेश्वरले घृणा गर्ने पापहरु हृदय भरी अँटी नँअटी छ जसले गर्दा हाम्रो हृदय अपवित्र भएको छ !
अब हामीले यो हृदय भित्रको पापहरुबाट छुटकारा पाउनलाई हामी त्यो बिमारी मानिसले आफ्नु बिमारबाट चँगाई हुनलाई गरेको जस्तै चिन्ता गर्नु परेको छ ! निरन्तर दिनमा कयौ पल्ट प्रार्थना गर्नु परेको छ ! जसरी डाक्टरले नखानु र नगर्नु भनेको कुरा देखि बिमारीले आफुलाई टाडा राखेको हुन्छ त्यसरी नै पर्मेश्वरको बिरुद्द गरिने पापहरु देखि हामीले आफुलाई टाडा राख्न परेको छ ! जसरी पापलाई पर्मेश्वरल घृणा गर्नु हुन्छ त्यसरी नै हामी पनि पापलाई घृणा गरौ ! यो पाप नै हो जसले हामीलाई पर्मेश्वरसँग कहिले एक् हुन दिँदैन यसैले शरीरलाई मार्ने रोग भन्दा आत्मालाई मार्ने पापसँग डराँउ अनि पवित्र जिवन जिएर यस सँसारमा पर्मेश्वरको नाँउको महिमा गरौ !
प्रभुको प्रेम अनि शान्ती हामी माझमा रहेको होस् !
Your Sister In Christ Aruna Rai
Aruna Rai	2014-09-16
ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ? Reviewed by Admin on Sep 16 . ख्रीष्ट येशुको पवित्र नाँउमा सबै दाज्यु भाई अनि दिदी बहिनीहरुमा मेरो जय मसिह् !!!!! ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ? शरीरलाई मार्ने रोग ख्रीष्ट येशुको पवित्र नाँउमा सबै दाज्यु भाई अनि दिदी बहिनीहरुमा मेरो जय मसिह् !!!!! ख्रीष्टीय जिवनमा हामी कुन कुरो देखि ज्यादा डराँउन पर्ला ? शरीरलाई मार्ने रोग Rating: 0
मेरो प्रेम…. (कथा)...मृत्युदेखी मुक्त...